IFarmPond Inn yindawo ephefumlayo kwaye iphumla kwigumbi lokulala eli-1, elijonge ichibi labucala. Ibekwe kwiihektare ezili-9, iFarmPond Inn yindawo oya kufuna ukuyindwendwela kwakhona. Kunye nokufikelela kumzila webhayisekile omangalisayo, uziibhlokhi kude nembali yeNevada kunye nesithili esinomtsalane edolophini. Gquma ngencwadi, hamba ukhwele iphenyane okanye uthobe nje kwimbono ekwidesika. Xa useFarmPond Inn, uyonwabela ulonwabo olulula ebomini!
IFarmpond inn yindlu ye-1500sf ejonge echibini lethu. Ngelixa sihlala kwipropathi le ayincanyathiselwanga kwikhaya lethu kwaye yindawo epholileyo ethe cwaka enezinto ezininzi ezinje: iitawuli zokuhlambela, izinto zangasese, ukupheka kunye nezinto zenkonzo yasekhitshini, umenzi wekofu, iibhedi ezikumgangatho ophezulu.
Sinezona hlabathi zingcono zozibini apha. Siyi-acreage yabucala kwidolophu encinci. Siyimizuzu ukusuka kwivenkile yokutya kodwa xa sisekhaya siziva ngathi sikumayile ukusuka kwimpucuko. Eli likhaya lethu lamaphupha kwaye siyavuya kakhulu ukwabelana ngalo!
Sifumaneka kangangoko ufuna ukuba sibe njalo. Sinokuhlala sifumaneka ngokufowuna okanye ngokubhaliweyo ukuba awusiboni kwipropathi!